३६ घण्टा नहुँदै संखुवासभा घट्ना प्रकरणकोमा प्रहरीलाइ मिल्यो सफलता ! – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र २२, २०७८ समय: १६:१०:०५
September 7, 2021 admin ebihaniसमाचार / समाजNo Commenton ३६ घण्टा नहुँदै संखुवासभा घट्ना प्रकरणकोमा प्रहरीलाइ मिल्यो सफलता !
तेजबहादुरका दुई छोराहरू जेठो रमेश र कान्छो नरेश वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियामा छन्। रमेशकी श्रीमती रञ्जनाको ह’ ‘त्या भएको छ। नरेशकी श्रीमती मुना भने झापामा बस्छिन्। कार्की परिवारले झापामा जग्गा किन्नलाई बैना गरिसकेको पाइएको छ। जग्गा किन्नलाई घरमा पैसा राखेको हुनसक्ने भएकाले सबैको ह’ ‘त्या गरेर लु’टपा’ट गरिएको हुनसक्ने प्रहरीको आ’शंका छ। ताजाखबर बाट
Last Updated on: September 7th, 2021 at 4:10 pm
७६७ पटक हेरिएको